Daawo Muuqaal: Isxariifintii Fashilka Ku Dhamaatay! Ciyaartoy Farsamo Ay Damacsanayeen Ku Fashilmay. Ronaldo, Neymar, Ibrahimovic Iyo Bale Oo Ka Dhex Muuqda. – Kooxda.com
Home 2017 January Muuqaalo, Wararka Maanta Daawo Muuqaal: Isxariifintii Fashilka Ku Dhamaatay! Ciyaartoy Farsamo Ay Damacsanayeen Ku Fashilmay. Ronaldo, Neymar, Ibrahimovic Iyo Bale Oo Ka Dhex Muuqda.
Daawo Muuqaal: Isxariifintii Fashilka Ku Dhamaatay! Ciyaartoy Farsamo Ay Damacsanayeen Ku Fashilmay. Ronaldo, Neymar, Ibrahimovic Iyo Bale Oo Ka Dhex Muuqda.
January 3, 2017 · by	Ahmed Hashi · 0
Garoomada kubada cagta waxa marar badan ay ciyaartoydu kusoo bandhigaan xirfado cajiib ah oo soo jiita indhaha daawadayaasha, balse mar walba uma suurto gasho ciyaartoyda inay wax u sameeyaan qaabkii ay qorsheyeen, waxaana marar badan dhacda inuu ciyaartoygu ku fashilmo xirfadii uu doonayay inuu soo bandhigo ama uu ku dhaafo ciyaartoyga kaso hor jeeda.
muuqaalkan maanta waxad ku daawan doontaan qaar ka mid ah ciyaartoyda iyo qaabkii ay ugu fashilmeen inay indhaha dadweynaha xadaan, muqaalkan oo ay ka muuqadan ciyaartoy waweyn sida Ronaldo, Neymar, Ibrahimovic, Bale iyo qaar kale.
Halkan laacibtv.net ka daawo muqaalka
Filed in: Muuqaalo, Wararka Maanta